Usola ubudedengu bodokotela owalimala esinyeni eyobeletha | News24
Usola ubudedengu bodokotela owalimala esinyeni eyobeletha
PHOTO: nokuthula khanyile UNksz Phindile Shezi
UKHALA ezimathonsi owesifazane wase-Mbali Unit 14 othi ufuna ukumangalela isibhedlela sase-Edendale ngomonakalo owenzeka kade eyobeletha.
UNksz Phindile Shezi (32), uthi wayoyobeletha amawele ngenyanga kaNdasa nonyaka ngesikhathi udokotela owayembelethisa emlimaza esinyeni sakhe.
“Ngabeletha ngenyanga yesikhombisa, ngesikhathi ngifika esibhedlela kwase kuphuthuma kakhulu odokotela bangitshela ukuthi kuzofanele ngiye kohlinzwa ethiyetha ukuze kukhishwe izingane zingaze zishone.”
Uthi waphaphama esefakwe isigubhu somchamo emuva kokubeletha kodwa wanganaka njengoba kuyihlalayenza komama abasanda kubeletha.
“Inkinga iqale ngesikhathi odokotela sebesola ukuthi kungenzeka kukhona okungahambi kahle ngoba emuva kwezinsuku ezimbili isigubhu somchamo sasisagcwele igazi.Ngabe sengithathwa ngayiswa emshinini wokuhlola esinyeni ngaphakathi kwatholakala ukuthi kunoketshezi olukhona phakathi kwesinye nesibeletho.”
Uthi odokotela bamtshela ukuthi kungenza ulimale ngesikhathi ebeletha.
“Babe sebengidlulisela egumbini labantu abagula kakhulu ngoba nami ngangizizwa ukuthi ngiyagula, ngingasakwazi nokuziyela endlini encane. Ngaphinde ngayiswa ethiyetha futhi ukuyolungiswa umonakalo esinyeni.
Ngahlala e-ICU izinsuku ezinhlanu ngemuva kwalokho, ngathi uma ngiphaphama abahlengikazi bangitshela ukuthi isimo sami sasibucayi kakhulu base bebona ngemishini engangixhunywe kuyo ukuthi ngisaphila.”
UShezi uthi wahlala isikhathi esingangenyanga nesonto esibhedlela ngoba umthungo wakhe wawuqhuma njalo uphuma nomchamo ungafuni ukuphola.
“Sengibuyele ekhaya ngo-Mbasa ngathi ngiya endlini encane ngezwa kunento elengayo kumina uma ngichama. Ngazitshela ukuthi amahlule egazi kodwa ngathi uma ngidonsa kwaphuma ipayipi elide la-plastiki,” kusho yena ekhala.
Uthi wathi uma ebuyela esibhedlela eyobuza ukuthi ipayipi elani, udokotela aqondana naye wamtshela ukuthi wafakwa lelipayipi ukuze izinso zakhe zikwazi ukusebenza.
“Okungiphatha kabi kakhulu ukuthi lelipayipi lafakwa ngaphandle kwemvume yami. Mangichama ngathi ngingahayiza ngenxa yobuhlungu obudalwa yilo lelipayipi, angisakwazi ngisho ukuzikhulula endlini encane kufanele ngisebenzise uchatho.”
Uthe odokotela bamtshela ukuthi kufanele abuye mhlaka 19 ku-Ncwaba ukuze ezokhishwa elinye ipayipi elasala ngaphakathi kuyena ngoba kwakufakwe amabili.
“Nginezilonda esinyeni sami futhi odokotela bathi sekunobuthi.Uma ngiya esibhedlela ngifuna ukukhuluma nodokotela owangibelethisa ukuze ezongichazele ngokwenzeka bangitshela ukuthi ngeke ngikwazi ukumbona kodwa angibhale incwadi bazoyidlulisela kuyena.”
Uthe isibhedlela silokhu sithembisa ukuthi sizohlela umhlangano abizwe lodokotela ukuze kucace ukuthi kwenzekani ngesikhathi elimala kodwa lokho kugcina kungenzekanga.
“Wangibulala lodokotela, angiselutho mina manje, noma ngihleli umchamo usuyaziphumela. Uma ngike ngaphuza ujusi okanye ngadla utamatisi angilali ebusuku kuvele kube sengathi ngiyasikwa kudingeke ukuthi ngifonele imoto yeziguli izongithatha ingise esibhedlela. Sengihlaselwe nayinkinga yokukhohlwa, ngiphathwa isiyezi. Isimo sempilo yami asisafani, sengize ngehla nasemzimbeni,” kusho yena ehlengezela izinyembezi.
UShezi uthe yize loludaba eselufake kubammeli abesibhedlela i-Edendale bayanqaba ukumnika amafayela akhe ukuze luzoqhubeka ludluliselwe enkantolo.
“Seziphelile izinyanga ezintathu ummeli ecela ifayela lami esibhedlela kodwa bayanqaba nalo. Lokhu kukhombisa ngokusobala ukuthi bayazi ibona abenza iphutha. Ngisho ngihambele esibhedlela ngiyohlolwa bathumela onogada ukuthi bangiqaphe ukuze ngingaphumi nalo ifayela.”
Okhulumela uMnyango wezeMpilo esifundazweni u-Agiza Hlongwane ucele ukunikwa inombolo kaShezi yasesibhedlela ukuze aphenye kabanzi ngaloludaba.
UShezi uthe kwatholakala ukuthi usenezilonda esinyeni nobuthi obuyingozi.